मत परिणाम आउन थाल्यो : "यस्तो छ ११ स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम, कहाँ कसले जिते ?" - Demo Khabar
मत परिणाम आउन थाल्यो : "यस्तो छ ११ स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम, कहाँ कसले जिते ?"
काठमाडौँ, बैशाख । देशभर स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ । शनिबार अपरान्हसम्म ११ वटा स्थानीय तहको परिणाम आएको छ । अहिलेसम्म निर्विरोध निर्वाचितसमेत गरी नेकपा एमालेले ५, नेपाली कांग्रेसले ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ र नेकपा माओवादी केन्द्रले १ स्थानमा जितेका छन् ।
शनिबार पौने चार बजेको परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले १८७ स्थानमा अग्रता लिएको छ भने नेकपा एमालेले १६६ स्थानमा अग्रता लिएको छ । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले ६९, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ९, र जसपाले ७ स्थानमा अग्रता बनाएका छन् ।
शनिवार, बैशाख ३१ २०७९०८:१६:४२